Ka dib shir sadax geesood ah oo wadammada Itoobiya, Eritrea iyo Somalia ay ku yeesheen caasimada Asmara ayaa waxaa billowday dadaalo ay saddexdan wadan ku doonayaan inay ku dhameeyaan colaadda u dhaxaysa Jabuuti iyo Eritrea.
Wafdi ka kooban wasiirrada saddexda wadan ee Itoobiya, Eritrea iyo Soomaaliya ayaa hadda bilaabay iskukeenida labada dal ee xuduudda isku haya.
- Colaadda labada dal -
Sannadkii 2008-dii ayay ahayd markii uu dhacay dagaalkii ugu horreeyey ee labada dal ee Jabuuti iyo Eritrea uu ka qarxay xuduudda ay isku hayaan ilaa haatan ee Jasiiradda Doumeira.
Colaaddii xilligaas bilaabatay ayaa illaa iminka taagan, taasoo sababtay dagaal lagu dhammaaday maxaabiisna lagu kala qabsaday.
- Beesha Caalamka Maxay ka tiri dagaalkaasi? -
Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa cambaarayn dusha uga tuurtay dowladda Eritrea.
Eritrea-yana waxay si caro leh u eedaysay iyana Mareykanka oo ay ku sheegtay inuu colaadda gobolka sii hurinayo.
Balse Jabuuti waa laga qabsaday deegaanka Doumeira, bilowgii hore ee dagaalka waxaa lagu eedeeyey inay qaaday dowladda Eritrea.
- Doumeira waa goob sidee ah? -
Doumeira waa deegaan jasiirad yar ah oo badda ku yaalla, waxaana dega qowmiyada Canfarta oo ku nool wadammada Jabuuti, Itoobiya iyo Eritrea, waa meel muhiim ah gaar ahaan dhinaca marinka badda cas.
Labada dalba waxay aaminsan yihiin inay Doumeira iyagu leeyihiin.
- Eritrea iyo dagaaladii ay gashay -
1990-kiina Eritrea waxay dagaalameen Jabuuti oo xuduuda ayaa la isku laayay
- Maxaa laga filan karaa dadaalladan ay wadaan madaxda gobolka? -
Itoobiya iyo Soomaaliya waa saaxiibo muhiim ah oo ay Jabuuti leedahay, isabadaladii itoobiya ka dhacay ayaa loo arkaa sababta ugu weyn ee hadda keentay dabaysha nabadeed ee gobolka ka curatay.